FISH: Tora uye Pima Mushandisi Kubatanidzwa pane Yako Inotevera Chiitiko | Martech Zone
FISH: Tora uye Pima Mushandisi Kubatikana paKo Inotevera Chiitiko
Chitatu, November 5, 2014 Chipiri, Mbudzi 4, 2014 Douglas Karr
FISH inotsigira zvigadzirwa, varongi vezviitiko, uye mitambo yemitambo, iine chiitiko chinoshanda chinogonesa kuunganidzwa kwevatengi data, inofambisa kubatanidzwa kwevateveri pamabasa ekushambadzira, uye inopa vateveri kugona kuunganidza zvemukati, kupinda mumasepisi, uye kugovana zviitiko kuburikidza nevezvenhau.
Kunyangwe iri kutora kuunganidzwa kwedata kwezviitiko zvema marquee, kuyera hunhu hwevanoenda kuzviitiko zvekambani kana kuongorora kubatanidzwa kwevatengi mumusangano, FISH inogona kuyera maitiro ese evashanyi. Iyo FISH yekuzivisa dashibhodhi inopa mukana wekukurumidza kusvika kune akakosha mametric, kusanganisira kunyoresa cheki ins, kubatanidzwa kweaseti, nguva dzemitsara, kurodha pasi nhare, SME Kubatanidzwa, nezvimwe.
Chikuva cheFISH chinonyanya kuve Live Chiitiko Chekushandisa Sisitimu inosimbisa varongi vezviitiko kuti vatore data revatengi, nepo panguva imwe chete vachigadzira nharaunda isina kukakavara yevafeni kuti vabate zviratidziro zvemagetsi, vatore zvirimo, vapinze sweepstakes, uye vagovane zviitiko kuburikidza nesocial media. Michael Gilvar, CEO kuFISH.
FISH Zvipiriso Zvinosanganisira
Chiyero Dashibhodhi - Tarisa uye utaure nezve chiitiko chechiitiko. Mamaneja echiitiko uye vanoita zvisarudzo vane mukana wekukurumidza kusvika kumatriki anokosha, kusanganisira kunyoreswa, kubatanidzwa kweaseti, nguva dzemitsara, kurodha pasi nhare, nezvimwe.
RFID Solutions - FISH inosanganisa ese mafomu eRFID, kusanganisira HF, UHF, NFC, uye UWB. Ivo vanoshandisa RFID kufambisa kukosha-kuchinjana pakati pevatengi nemabrands - vachibvumira vatengi kutora nyore nyore zvirimo, kugovana zviitiko kuburikidza nesocial media, uye kuwana mvumo yekuwana - nepo vachibvumira iyo brand kutarisa maitiro evatengi uye kuendesa bespoke mameseji munguva chaiyo.
Kunyoresa Nhare - chiitiko chekunyoresa chiitiko apo mafeni anokwanisa kunyoresa uye kupfuura zvachose kunyoreswa kwenzvimbo. Kana fan yacho yanyoresa, ivo havazodikanwa kuti vatore chinongedzo panzvimbo, asi, vanozove nekwanisi yekushandisa yavo nharembozha seyese yekuziva chiitiko chekuita. Ivo vateveri vanozogovana yavo yekutaurirana nhare kuburikidza nefoni webhu fomu, uyezve vanounzwa nesarudzo dzekushandisa yavo mbozha eVoucher (ingave yakaiswa mukati mekushandisa, kana kuendeswa kuburikidza neSMS). Sisitimu yavo tekinoroji agnostic - ichibvumira iyo mudziyo kuti iwedzere chero hunyanzvi hunowanikwa kusanganisira BLE, QR, kana NFC.
Lead Management Maitiro - FISH inopa pre-chiitiko, pane-saiti, uye nhare mbozha masisitimu ayo anotendera mabrands kunyatso kuunganidza data yevaenzi, kudzikisa mitsara, uye kufambisa yakajeka kukosha kukosha pakati pevaenzi nemabrand. Ese mapuratifomu e data akasunganidzwa akasunganidzwa pamwe neshure-kumagumo CRM uye masisitimu ekuzivisa.
Brand Mumiriri Zvishandiso - Vashandi vepaPresite vane RFID Verenga / Nyora anokwanisa Brand Ambassador mahwendefa kana nhare mbozha dzinobvumidza mabhenji kunyoresa vashanyi, kuendesa zvirimo, kutora mafoto anokwezva nemavhidhiyo, kufambisa magariro enhau, uye kusundira mapikicha ane mazita kuSocial Media - chero kupi nguva chero nguva.
Kupinda Kudzora Masystem - Kuisa mabhande echikwata eRFID, VIP Access Credentials uye mamwe ma mechanics, FISH inopa masisitimu ekudzivirira ekugona kubata zvakanaka kupinda kwevaenzi kune ese marudzi ezviitiko nenzvimbo, kusanganisira Marquee Zviitiko, Charity Zviitiko uye Mhemberero. Sisitimu yavo inopa chaiyo-nguva kuburitsa, ichipa inoitisa ongororo yezvose zviitiko, uye yakanyanya kuratidzwa dhata redundancy mubhizinesi.
Mufananidzo Kushambadzira Solutions - FISH inopa akati wandei ekushambadzira mafoto anogonesa mabhenji kutora onsite mapikicha evashanyi vavo vane tsika dzakasarudzika mamiriro uye vozvitumira kuFacebook, Instragram, Twitter, Micro masayiti, kana email munguva chaiyo.
Yemagariro Midhiya Kubatanidzwa - Vashanyi vanogashira inowirirana inogonesa michini, senge mawristband, VIP Passes, kiyi fobs, kana Mobile eVoucher sezvavanopinda muchiratidzo chiitiko. Vashanyi vanonyoresa avo vanamakanika uye vanoshamwaridzana neyavanofarira social media account. Vashanyi vanobva vashandisa michina yekushandisa kana vamiririri vechiratidzo nemahwendefa ePC anovaongorora kuti vaite mashandiro ekuita zvaanofarira, uye tumira mapikicha uye mavhidhiyo kumaakaundi enhau enhau munguva chaiyo.
Analytics - chaiyo-nguva, data rinokwanisa kuyerwa iro rinogona kududzirwa kuita sarudzo mune ramangwana, kuongorora kwakakosha uye ROI yakaratidza. FISH inounganidza kwete chete data rekunyora, asi data rinopa mamiriro uye rinopa masimba ekuita sarudzo dzakanaka. Zvishongedzo zveData (zvinowanzo kunzi "meta dhata") senge saizi yekutsika, mamiriro ekunze, kukwidziridzwa, huwandu hwevashandi, nezvimwe zvinounganidzwa uye kuongororwa kuti vabatsire vatengi vavo kwete kungonzwisisa mhedzisiro, asi zvakare kunzwisisa izvo zviitiko zvezviitiko zvinopa kutyaira izvo mhedzisiro.
Iyo FISH track shongwe mhinduro yakasarudzika iyo inokwanisa kuunganidza data kuburikidza neRFID tag. Heino pfupiso vhidhiyo:
FISH ichangobva kubatana nevatsigiri vedu ku Postano, Kugadzira yekutanga-ye-yayo-mhando mhinduro ye fan uye brand zviitiko zvezviitiko, nhandare uye mu - chitoro chitoro. Iko kusanganisa kunogonesa mabrandari ekuvandudza zvinoshamisa zviitiko zvechiitiko kune vateveri nekunyatso kubatanidza kunyoreswa, kubheji, kugovana munharaunda, uye kuona munharaunda.
Iyo FISH chikuva inopa masimba mazhinji epasirese anozivikanwa marangi uye zviitiko, kusanganisira US Army, US Air Force, Hyundai, Samsung, NFL, NBA uye Major League Soccer.
Tags: kupinda masisitimu ekudzorabrand mumiriri maturusimusangano analyticszviitiko zvekambanichiitikochiitiko analyticschiitiko chinotungamira manejimendiChiitiko manejimendichiitiko manejimendi dhibhodhiFISHhyundaikutungamira manejimendiMajor League SoccerKushambadzira Musanganomobile kunyoresaNBANFLmapikicha ekushambadzira mhinduromapikicha ekushambadzira mafotopostanorfid mhindurorfid kumakaSamsungkubatana kwenhauUS Air ForceMauto eU.S.hunhu hwevashanyi
Ndeapi akareba urefu hwe… Zvese?
Kugadziridza Email Dhizaini Kutora Kutarisisa kweWako Reader